Ismaamulada oo loogu baaqay inay miisaaniyad u qoondeyaan la tacaalidda abaaraha – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiirka wasaaradda dowlad wadaajinta ee dalka Mr. Eugene Wamalwa ayaa dowlad deegaanada kala duwan ku booriyay inay dib u eegis ku sameyaan miisaaniyaddooda oo ay dhaqaale gaar ah u qoondeyaan wax ka qabashada xaaladaha ka jira 17 ka mid ah ismaamulada dalka sida laga soo xigtay hay’adda laanqayrta cas Kenya.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in ismaamulada la doonayo inay qaadaan tallaabada ugu horeysa ee lagu badbaadinayo noolosha shacabka.
Dowladda dhexe ayuu sheegay inay dowlad deegaanada caawinayso marka uu gaabad dhaqaale ku yimaado
Mr. Wamalwa ayaa hadalkan jeediyay xilli uu ku sugnaa magaalada Hola ee Tana River oo ka tirsan gobolka xeebta.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in dowladda ay guda gali doonto inay cunno u qeybiso shacabka ku nool deegaanada ay abaarta si gaar ah u saameysay.
Wasiirka ayaa sido kale sheegay in dowladaha Kenya iyo Belgium ay iska kaashanayaan mashruuc dhanka biyaha ah oo ku kacaya 7 bilyan oo shilin.
Mashruucan ayaa gacan ka geysan doono sare u qaadidda wax soo saarka beeraha si mustaqbalka xal loogu helo ka hor tagga cunno yarida.
Sido kale xildhibaanka laga soo doortay deegaanka koonfurta Mandera Aadan Xaaji Cali ayaa ku baaqay in dowladda ay kordhiso dhaqaalaha 2-da bilyan ah ee ay wax uga qabanayso saameynta dhanka biyo yarida iyo cunno la’aanta halka dhigiisa waqooyiga Mandera Bashir Sheekh Cabdullahi uu dowladda ugu baaqay inay dadaalkeeda laba laabto oo laga hor tago in Mandera uu qof Gaajo ugu dhinto, gargaarkana la gaarsiiyo dhammaan deegaan baarlamaaneedyada
Guddomiyaha xisbiga KANU ahna senetarka ismaamulka Baringo Mr. Gideon Moi ayaa dhankiisa dowladda kula taliyay inay galeeyda ka iibsato beeralyda wadanka ee soo saaray halkii ay dadweynaha u qeybin lahayd midda ku jirta bakhaaradda waweyn ee dowladda oo uu Eugene Wamalwa, wasiirka dowladda wadajinta ku sheegay ilaa iyo afar milyan oo loorar galeey ah.
Weli waxaan ku guda jirnaa wararka ku saabsan saameynta abaaraha iyo dadalada kala duwan, barasaabka ismaamulka Nairobi Mike Sonko ayaa cuuno gargaar u qeybiyay shacabka ku nool koonfurta Pokot.
Baabuur dhowr ah oo wada gargaar ayaa la geeyay tuulada Suguta si shacabka cunnadaasi loogu qeybiyo.
Xildhibaanka koonfurta Pokot David Pkosing ayaa Sonko uga mahadceliyay tallaabada uu qaaday .
Waxaa uu dowladda ismaamulkaasi ugu baaqay inay dib u eegis ku sameyso miisaaniyadeeda, isaga iyo Sonko oo dadweynaha halkaasi kula hadlay ayaa yiri
In ka badan 120, 000 oo ka mid ah shacabka koonfurta Pokot ayay saameyn gaar ah ka soo gaartay abaaraha degaanadaasi ka jiray toddobaadii bilood ee ugu dambeeyay.
← In ka badan 100 qof oo rag hubeysan ay ku dileen Mali
Xildhibaanka Dadaab oo codsaday in la furo xadka soomaaliya iyo Kenya →